तपाई आजको दिन यी काम गर्नुस : २०७६ चैत १७ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
तपाई आजको दिन यी काम गर्नुस : २०७६ चैत १७ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७६ चैत १७ गते सोमवार । तदनुसार इ.स. २०२० मार्च ३० तारिख । ने.सं. ११४० चौलाथ्व, चैत्र शुक्लपक्ष षष्ठी, २२ः५६ उप्रान्त सप्तमी ।
बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । चिताएको काम सम्पादन हुनेछ । पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ । मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । मान–सम्मान प्राप्त हुनेछ । सम्पादित कामबाट धन लाभ हुनेछ । आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ ।
मिहिनेतले आम्दानी बढाउनेछ । आयस्रोत बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । दिगो काम थालनी हुन सक्छ । पढाइमा पनि प्रगति हुनेछ। सट्टापट्टा, लेनदेन आदिमा फाइदा हुनेछ । व्यापारमा थन्किएका वस्तु बिक्री हुनेछन् र अड्किएको रकम उठ्नेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । भविष्यका लागि रुचिका विषयमा लगानी बढाउन सकिनेछ ।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ । अरूका काममा धेरै समय खर्चनुपर्ला । विगतका समस्या बल्झिन सक्छन् । सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ । शुभचिन्तकहरूको साथले कर्मयोग बलियो रहनेछ । तर, अरूको भर पर्दा काम अधुरो रहन सक्छ ।
आँटले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम सम्पादन हुनेछ । सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । नयाँ काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ । व्यापारले फाइदा दिनेछ। तत्काल धेरै गर्न नसकिए पनि पछिका लागि जग बसाउने समय छ ।
राशिफले जेसुकै भने पनि तपाई भने कर्ममा विश्वास गर्नुस । निरन्तर कर्म गरिरहनुस एक दिन अवश्य सफलताले तपाईको पाउ चुम्नेछ ।